एबीसी टेलिभिजन माओवादीको छानबिनमा – Media Kurakani
एबीसी टेलिभिजन माओवादीको छानबिनमा
September 30th, 2012 Media Kurakani Archives
गएको भदौ १९ गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित लेखमा एबीसी टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक तथा समाचार प्रमुख शुभशंकर कँडेलले आफ्ना अभिभावकको सहयोगका कारण एबीसी टेलिभिजन आफ्नो स्वामित्वमा आएको उल्लेख गरेका छन्। अभिभावकको कस्तो प्रकारको सहयोग हो भन्ने प्रष्ट नखुलाएपनि बुझ्न त्यति कठिन छैन, टेलिभिजनको स्वामित्व नै आफ्नो हातमा आउने सहयोग भनेको आर्थिक नै हो।
उनले आफ्ना मुख्य अभिभावकको पहल र सहयोगमा संस्थामा रहन नचाहने मानिसहरुलाई बिदा र कतिपयको आर्थिक आकार घटाएपछि ‘हात फुकाएर’ काम गर्ने वातावरण बनेपनि बाह्य रुपमा एबीसीप्रतिको घेरावन्दी र आक्रमण तथा विरोध भने झन् बढेको उल्लेख गरेका थिए।
अहिले त्यही ‘सहयोग’का कारण एबीसी टेलिभिजन भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिएको छ। यो एकीकृत नेकपा माओवादी भित्र छानबिनको विषय बनेको छ। जहाँ एबीसी टेलिभिजन र यसका मालिक शुभशंकर कँडेलमात्र हैन, माओवादीका नेता तथा शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्मा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत प्रत्यक्ष रुपमा यो काण्डमा मुछिएका छन्, जोडिएर आएका छन्।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पैसा माओवादी नेता तथा शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्माले आफ्ना ज्वाईं तथा एबीसी टेलिभिजनका सञ्चालक शुभशंकर कँडेललाई दिएको भन्दै माओवादीद्वारा गठित केन्द्रीय सम्पत्ति एवं आर्थिक स्थितिको उच्चस्तरीय छानविन आयोगमा उजुरी परेको छ।
नेता अमिक शेरचनको नेतृत्वमा गठित छानविन आयोगमा नेता शर्मामार्फत एबीसीमा एकीकृत माओवादीको ठुलो धनराशि लगानी भएको र सो लगानी व्यक्तिगत धनमा रुपान्तरण गरिएको आरोप उजुरीमा लगाईएको छ। नेपाली मिडियाको इतिहासमा निजी टेलिभिजन भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिएको सायद यो पहिलो घटना हुनुपर्छ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले एबीसी टेलिभिजनलाई औपचारिक रुपमा पार्टीको आधिकारिकता नदिएको भएपनि सञ्चालकले माओवादीकै भनि दावी गर्ने गरेका छन् र यसका सामाग्री पनि सोही अनुरुपका छन् भन्दा अन्यथा नहोला।
२०६९ असोज १० मा प्रकाशित ‘जनआस्था’ साप्ताहिकका अनुसार उजरीमा व्यक्तिगत धनमा रुपान्तरण गरिएको पार्टीको सम्पत्ति पार्टीमै फिर्ता ल्याइनुपर्ने माग दाबी गरिएको छ। समाचारमा प्रचण्डले मन्त्री दीनानाथ शर्मा मार्फत एबीसी टेलिभिजनमा लाखौँ लगानी गरेकोले पार्टीको आम्दानी खोज्ने सिलसिलामा टेलिभिजनसमेत छानबिनको दायरा भित्र परेको उल्लेख छ।
जनआस्थाले श्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ –
शुभशंकर कँडेल सगरमाथा टेलिभिजनमा कार्यरत रहँदा प्रचण्डका सहयोगी जोखबहादुर महराले पत्रकार ओम शर्मालाई साक्षी राखेर ५० लाख रुपैयाँ कँडेललाई दिएका थिए। तर, उनले १७ लाख आँफै राखेर ३३ लाख मात्रै सगरमाथा टिभीका निर्मल गुरुङलाई बुझाए। पछि सगरमाथा टिभी छाडेर एबीसी सञ्चालन गर्ने क्रममा कँडेलले गुरुङबाट आफ्नो सेयर भन्दै ७५ लाख रुपैँया लिएर निस्किए पनि माओवादी पार्टीको सो सम्पत्ति कँडेलले अहिले सम्म व्यक्तिगत बनाइरहेका छन्।
शेरचन आयोगले छानविन गरि सत्य सार्वजनिक गरेको खण्डमा कँडेलले ५० लाख भन्दा बढी रकम माओवादीलाई बुझाउनुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ। समाचारमा साक्षी राखेको भनी उल्लेख गरिएका ओम शर्मा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव समेत हुन्।
पार्टी भित्र बढ्दै गएको आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार मुद्दाले साउनको पहिलो साता काठमाडौंमा भएको विस्तारित बैठकमा नाराजुलुसको रुप लिएपछि एमाओवादीले केन्द्रीय तहका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा जम्मा ६५ उजुरी परेका छन्। गत असोज १० गते बुधबार सार्वजनिक गर्ने भनिएको प्रतिवेदनलाई छानविन कार्य नसकिएको भन्दै रोकियो। अन्तिम रुप दिन अझै केहि दिन लाग्ने आयोगले बताएको छ।
‘आफ्नै बाउको च्यानल’
यो ब्लग तयार पार्ने क्रममा माओवादीकै कतिपय पत्रकारले एबीसी टेलिभिजनलाई एबीसी अर्थात आफ्नै बाउको च्यानल समेत भन्ने गरेको भेटियो। मन्त्री दीनानाथ शर्माका ज्वाईँ र परिवारका सदस्य हर्ताकर्ता रहेको र उनीहरुकै हालीमुहाली भएकोले माओवादी भित्रै टेलिभिजनलाई यस्तो नाम दिइएको रहेछ।
माओवादी भित्र एबीसी टिभी, शुभशंकर र दीनानाथ चर्चाः
ब्लग तयार पार्ने क्रममा माओवादी पत्रकार र कार्यकर्ताले एबीसी टेलिभिजन, दीनानाथ शर्मा र शुभशंकर कँडेलका बारेमा अनेक चर्चा सुनाए। सबैका कुरा सुनेपछि हामीले निकालेको निष्कर्ष यस्तो छ –
दीनानाथः पहिले भट्टराईतिर अहिले प्रचण्डतिर
दीनानाथ शर्मा माओवादी जनयुद्धका क्रममा नेता बाबुराम भट्टराईसँगै कारबाहीमा परेका थिए। त्यतिबेलैदेखि उनी भट्टराई पक्षधर थिए। तर, २०६८ साल बैशाखमा भएको धोविघाट गठबन्धनका बेला दीनानाथ अध्यक्ष प्रचण्डतिर लागे। प्रचण्डतिर लागेपछि भट्टराई पक्षधरले शर्मालाई प्रचण्डसँग पैसा लिएर क्याम्प परिवर्तन गरेको आरोप लगाएका थिए।
तीन महिनादेखि रोकिएको तलब एकैपटक
त्यस समयमा एबीसी टेलिभिजनमा पाँच महिनादेखि पत्रकार/कर्मचारीको तलब रोकिएको हल्ला चलेको थियो। शर्माले भट्टराई क्याम्प छाडेपछि पत्रकार/कर्मचारीले एकैपटक तीन महिनाको तलब पाएका थिए। त्यसलाई भट्टराई पक्षधरले शर्माको क्याम्प परिवर्तनसँग जोडेर प्रचार गरेका थिए।
प्रचण्डले शर्मामार्फत एबीसी टेलिभिजनलाई पैसा दिएको हल्ला भट्टराई पक्षले चलाएका थिए।
शुभशंकरः भट्टराईलाई छोडेर प्रचण्डको वकालत
शुभशंकर कँडेल पहिले भट्टराई पक्षधर नै थिए। भट्टराई पक्षधर हुँदा कँडेलले प्रचण्डलाई अधिनायकवादी, एकमनावादी, निरंकुशजस्ता आरोप लगाएर लेख लेख्ने गर्दथे। ससुरा शर्माले क्याम्प परिवर्तन गरेपछि कँडेलले पनि एक्कासी क्याम्प परिवर्तन गरेका थिए। त्यसपछि उनले प्रचण्डको पक्षमा कलम चलाएका थिए। धोविघाट गठबन्धन कायमै हुँदा शर्माले क्याम्प परिवर्तन गरेलगत्तै केन्द्रीय सदस्य कृष्ण केसीको सर्वहारा कोषको आयोजनामा भएका कार्यक्रममा कँडेलले प्रचण्डको पक्षमा वकालत गरेका थिए।
त्यतिबेलै प्रज्ञा भवन कमलादीमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डका पक्षमा कँडेल खुलेर लागेका थिए।
बैद्यलाई प्रचारको राम्रो साधन
प्रचण्डका विरुद्धमा लेखिएका कँडेलका लेख/रचनालाई धोविघाट गठबन्धन टुटेपछि बैद्य पक्षले प्रचारका लागि समेत प्रयोग गरेको थियो। कँडेलको असली रुप भनेर बैद्य पक्षले पचण्डको विरुद्ध लेखिएका लेख/रचना सार्वजनिक रुपमै ‘क्षेप्यास्त्र’ साप्ताहिकमार्फत प्रचार गरेको थियो।
एबीसी टेलिभिजनलाई एमाओवादीले भने हालसम्म पार्टीको आधिकारिक टेलिभिजन मानेको छैन। प्रचण्डसँग नाम जोडिएका अर्का व्यापारी अजय सुमार्गीको समेत एबीसी टेलिभिजनमा लगानी रहेको बताइन्छ।
‘अभिभावकको सहयोगका कारण एबीसी मेरो स्वामित्वमा’
नयाँ पत्रिका दैनिकमा २०६९ भदौ १९ गते प्रकाशित माथिको लेखमा शुभशंकर कँडेलले केही साथीहरु जम्मा गरेर २०६४ मा सुरु गरेको सगरमाथा टेलिभिजन मूल रुपमा एजेण्डा सेटिङको संघर्षले दुर्घटनामा परेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले लेखमा लेखेका छन् – ‘त्यसपछि मेरा शुभचिन्तक शुभेच्छुक र सहयोगीहरुको ठूलो समूहको सहयोगमा २०६५ भाद्र १९ गतेबाट एबीसी टेलिभिजन सुरु भयो। एबीसीको सुरुवात नै नेपाली मिडिया उद्योगमा एउटा तहल्काका रुपमा आयो। अत्यन्तै छोटो समयमा जनताका मनमनमा स्थापित भयो। यसले हामीप्रति डाहा र इश्र्या गर्नेहरुलाई नाजवाफ बनाइदियो।’
उनले एबीसीले वामपन्थी बृतमा एउटा ठूलो रक्तसञ्चारको काम गरेको र बाम इतर बृतमा वामपन्थीहरुका विरुद्ध उभिन पर्दा दशपटक सोच्न बाध्य बनाइदिने अवस्था श्रृजना गरेको लेखमा उल्लेख गरेका छन्।
यो ब्लगसँग सान्दर्भिक लेखको एक अंश यस्तो छ –
एबीसी टेलिभिजनले पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउने सम्मुखमा आइपुग्दा अघिल्लो च्यानलमा जस्तै आन्तरिक रुपमा संघर्ष सुरु भयो। हाम्रा सहयोगी र शुभचिन्तकहरु विरोधीहरुबाट हुने हामीप्रतिको टिकाटिप्पणी र आलोचनाबाट आत्तिन पुगे। कतिपय मित्रहरु दुश्मनमा बदलिए। तिनीहरुको शेयर समेत आफै लिनु पर्ने अवस्था आयो। सुरु देखिका एकाध बाहेकका सबै सहयोगीलाई सँगै लिएर हिँड्न मैले हदैसम्मको प्रयत्न गरेँ। कतिपय कथित प्रोफेशनललाई संस्थामा भित्राउने चक्कर समेत भयो। उनीहरुबाट पनि नतिजा शुन्य भएपछि बल्ल मेरा सहयोगीहरु अलिक हच्के। त्यो बीचमा संस्था धेरै घाटामा गइसकेको थियो। संस्थाका लगानीकर्ता भनिएका कतिपय मानिसहरु नै संस्थाका विरुद्धमा लागेपछि के हुन्छ ? त्यो संघर्ष झण्डै तीन वर्षसम्म लम्बियो।
यही अघिल्लो आर्थिक वर्षको मध्यतिर मेरा मुख्य अभिभावकको पहल र सहयोगमा संस्थामा रहन नचाहने मानिसहरुलाई बिदा गरियो। कतिपयको आर्थिक आकार घटाइयो। त्यसपछि बल्ल हात फुकाएर काम गर्ने वातावरण बनेको छ। तर बाह्य रुपमा एबीसीप्रतिको घेरावन्दी र आक्रमण तथा विरोध झन् बढेको छ।
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशति लेख एबीसी टिभीको वेबसाइटमा पनि छ। पढ्नुहोस्ः टेलिभिजन मिडियाको नौ वर्षे ठक्कर, पाँच वर्षिय संघर्ष
आयोगले साँच्चै छानबिन गरि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ला त ? ढुक्क नहुनु होला किनकी यो आयोगपनि माओवादीकै भएकोले यसले वास्तविकता जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्ला र सोही अनुरुप कारबाही अघि बढाउला भन्नेमा भने ठुलै शंका छ।
तपाईँलाई केही भन्नु छ ? ब्लग मन परे लाइक गर्नुहोस्होस्, सेयर गर्नुहोस्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत साथीभाईमाझ बाँड्नुहोस्। मन नपरे कमेन्ट बक्समा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्नुहोस्।
Tags ABC Television Naya Patrika Shubha Shankar Kandel UCPN Maoist
सम्पादक ज्यू! पत्रिकाको चाबी कोसँग छ ? »
« दशैँ, तलब र पत्रकार महासंघको गाईजात्रा
© 2012-2018 Media Kurakani. All Right Reserved Theme by Mizmizi